Agbaze nke Arctic na-emetụta nri nke polar bea | Netwọk Mgbasa Ozi
Polar bea, ndị North Pole kachasị anụ ọhịa, aghọwo ihe nnọchianya nke mgbanwe ihu igwe. N'akụkụ a nke ụwa, ọnọdụ okpomọkụ na-anọgide n'ọtụtụ ogo dị n'okpuru efu, kpọmkwem, site na -43 ruo -26 Celsius odika. N'ihi ya, anụmanụ ndị a magburu onwe ha ịchụ nta akàrà, ndị bụ isi ihe oriri ha, na-enweghị nnukwu nsogbu, mana na okpomoku zuru ụwa ọnụ ọnọdụ gị na-agbanwe ọtụtụ.
Dika akwukwo omumu nke edeputara na »Journal of Animal Ecology», a na-amanye ha iri akwa nke ọbọgwụ, geese na seagulls iji lanarị.
Charmain Hamilton, onye ọkammụta na ulo oru Norwegian Polar Institute, kọwara na tupu okpomoku zuru ụwa ọnụ amalite igosi onwe ya na North Pole, ice ice dị na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri n'akụkụ ihu glacier ruo oge ngwụsị oge okpomọkụ. Yabụ, akàrà nwere ike izu ike n'akụkụ ndị na-egbu ha ume ma anụ ọhịa bea nwere ike ịchụ ha.
Sɛ nhwɛso no, wɔ Svalbard, Norway mmeae bi a ɛbɛn Arctic Po so no, okpomọkụ ebiliwo okpukpu atọ ngwa ngwa karịa n'akụkụ ndị ọzọ nke mbara ụwa, yabụ akpụrụ na-emebi emebi ma dị egwu, ọkachasị maka anụ ọhịa bea.
»Dika nzaghachi nke oke osimiri emeela ka o siere ha ike ichu akara akwara, polar bea ugbu a na-etinye obere oge na mpaghara nke glaiders, na-eme njem dị ukwuu kwa ụbọchị na wepụtakwu oge iji tụgharịa n'akụkụ nri nri ndị ọzọ, dị ka ngalaba ịzụlite ozuzụ ducks na geeseHamilton kwuru.
90% nke nri nke anụmanụ ndị a na-adabere na anụmanụ ndị ọzọ. N'ihi nzube ya, ha nwere ọtụtụ ihe isi ike karịa iji nweta nri ha bụ isi. Ọ bụrụ na nke a gaa n’ihu, usoro nri nwere ike ịgbanwe nke ukwuu nke na ọ nwere ike imenyụ ha, ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ nnụnụ pere mpe ma e jiri ya tụnyere ọnụ ọgụgụ anụ ọhịa bea.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Arctic wim tebea te sɛ polar po so ahyɛn gyinabea
Nnukwu akwa ice Larsen C dị na Antarctica na-achọ ịgbaji